Vydia: Gadzirisa Yako Vhidhiyo Zvemukati uye Dhijitari Kodzero
Muvhuro, Kukadzi 19, 2018 Svondo, Kukadzi 18, 2018 Douglas Karr
Vydia ikambani yeInc 500 tekinoroji tekinoroji inopa simba kune vanogadzira kuti vagadzirise zvirimo uye kodzero dzedhijitari kuburikidza nepuratifomu imwe chete. Vanogadzira zvemukati vari kushandisa simba revhidhiyo munzvimbo dzese dzemagariro dziripo, zvisinei, ruzivo rwavo uye kutonga pamusoro penzvimbo yavo yehungwaru ishoma Vydia iri kupa simba vagadziri nekugadzirisa iri dambudziko nekuchenjera, kwese kushanda. Roy LaManna, Muvambi uye CEO weVydia Vydia's Agency Zvirongwa Zvinosanganisira kugona ku:
Chipiri, Zvita 26, 2017 Chipiri, Zvita 26, 2017 Donna Moores
Vashambadziri vanogara vachitsvaga nzira nyowani uye marongero ekusvikira vateereri vavo uye vawane mhedzisiro kubva mumishambadziro yekushambadzira. Kushambadzira kweruzhinji irimwe zano rakadai rinopa vashambadzi mukana wekupinda zvakadzika mukati mevateereri uye kunzwisiswa zvirinani zvidijiti uye zvavanofarira pamusika wavo. Chii chinonzi Generational Marketing? Kushambadzira kweruzhinji inzira yekukamura vateereri muzvikamu zvinoenderana nezera ravo. Munyika yekutengesa, iyo
Nei Mushandisi-Akagadzirwa Zvemukati Anotonga Kumusoro MuZera reSocial Media
Svondo, Kukadzi 5, 2017 Svondo, Kukadzi 5, 2017 Corey Bloom
Zvinoshamisa kuona kuti tekinoroji yakashanduka sei munguva pfupi yakadaro. Yakaenda kare mazuva eNapster, MySpace, uye AOL dial-up inotonga pamusika wepamhepo. Nhasi, mapuratifomu enhau enhau anotonga akakwirira mudenga. Kubva paFacebook kuenda pa Instagram kuenda kuPinterest, aya masocial media ave zvinhu zvakakosha zvehupenyu hwedu hwezuva nezuva. Tarisa kwete kumberi kupfuura inguvai yatinoshandisa pasocial media zuva rega rega. Maererano naStastista,
ROBO: Sei Nhasi Vatengi Vanotsvagisa Pamhepo uye Tenga Pasina
China, Kurume 24, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kunyange isu tichiramba tichiita chibvumirano chikuru kubva mukukura kwekutengesa pamhepo, zvakakosha kuyeuka kuti makumi mapfumbamwe muzana ezvekutenga kwevatengi zvichiri kuitirwa kune yekutengesa. Izvo hazvireve kuti online haina simba rakakura - zvinoita. Vatengi vachiri kuda kugutsikana kwekutarisa, kubata uye kuyedza-kutyaira chigadzirwa usati waibhadhara. ROBO haisi nyowani, asi zvave kuita zvinoitika murwendo rwevatengi rwekutenga uye a